Yongeza isiCwangciso sakho soMgangatho kwiiMephu zikaGoogle | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 27, 2012 NgoMgqibelo, Novemba 24, 2012 Douglas Karr
Nokuba uyivenkile enqwenela ukwenza imephu kwiivenkile zakho, indawo ethengisa ukuthengisa efuna ukwenza imephu kumasebe akho, okanye isakhiwo sorhwebo esinqwenela ukwenza imephu kubaqeshi baso, lixesha lokuba ungenise izicwangciso zakho zomgangatho kwiZicwangciso zeMephu zikaGoogle.
Usenokuba uqaphele ukuba ezinye iivenkile ezithengisa iimpahla, ezinjengeevenkile ezinkulu, sele ziqalisile ukwenza imephu kwindawo esezivenkileni. Ukuza kuthi ga ngoku, azibonakali zichanekile, nangona kunjalo, yiyo loo nto uGoogle evulela abasebenzisi ukuba balayishe ezabo iiplani zomgangatho! Lo mfanekiso weevenkile zentengiso yethu ubonakala ungenazo iivenkile zamva nje- kwaye iindawo ezivenkileni kuzo azichanekanga.
Ukuba awunayo imifanekiso esemgangathweni yezicwangciso zakho zomgangatho oza kuzilayisha, awunakukhathazeka. Unokwakha isicwangciso sakho somgangatho usebenzisa isixhobo esinjenge Luxolo.
Nje ukuba isicwangciso somgangatho sijongeka sihle, kufuneka usithumele njengefayile esemgangathweni. Thumela ngaphandle isicwangciso somgangatho, ulayishe ngeZicwangciso zoMgangatho weGoogle Maps, kwaye uyigqume ngaphezulu kwipropathi.
Njengoko ii -apps zeselfowuni zifumana ngakumbi nangakumbi ngokuchanekileyo, kunye nokwamkelwa kweemephu kunye neenkonzo ze-geolocation skrocket, kutheni ungaqinisekisi ukuba iiplani zakho zomgangatho ziboniswa ngokuchanekileyo! Oko kungazisa ukugcwala kwabantu ngakumbi kwindawo yakho… ngaphandle kochuku lokungayifumani emephini!
tags: yenza isicwangciso somgangathoisicwangciso somgangatho wokuthumela ngaphandleicebo laphantsiiimaphu zikagoogleiimephulayisha isicwangciso somgangatho
Ukuthengisa okuTyhilayo okuvela kwiNcwadi yokuNgena
Nov 27, 2012 kwi-11: 51 AM
Kuthekani ngabakhi bamakhaya? Ngaba banokuzilayisha iiplani zabo zomgangatho kwiimephu zikaGoogle zeemodeli? Kumakhaya angekakhiwa… njengendlela yokuthengisa kwiinjini yokukhangela? Kufanelekile ukuvavanywa mhlawumbi